Aung's Investment: Uncertainties Drag the Markets
Sorry Folks. Been super busy. Marketဟာ မေလဆန်းကတည်းက Super volatileဖြစ်နေတာ (especially here in Asia) အားချိန်များရမလားမှတ်တယ်၊ Quote screenနဲ့ မျက်စိနဲ့ ခွာလို့ကို မရဘူး။ အခုတလောဖြစ်နေတာတွေ အားလုံးကို အောက်မှာ လိုတိုရှင်းပဲ Analyseလုပ်ပေးထားပါတယ်။
The most annoying thing - Uncertainty
Marketတွေဟာ Data/Newsကောင်းကောင်းဆိုးဆိုး တိတိကျကျသိရရင် Price inလုပ်ပြီး Move onလုပ်နိုင်ပါတယ်။ တီကောင်ဆားကြောက်သလို Marketတွေကြောက်တာကတော့ Uncertaintyပါပဲ။ ဟိုလိုလို၊ ဒီလိုလို ဖြစ်နေတာများလေ Marketဟာ Sell first, Ask laterဆိုတဲ့ စကားအတိုင်း အရင်ဆုံးစလုပ်တာကတော့ Selloffပါပဲ။
Uncertainty No. 1
Global Growthဟာ temporary slowလား၊ ပိုဆိုးမယ့် double-dip recessionဘက်ကို သွားနေတာလားဆိုတာ အခုတလော မှန်းရခက်ပါတယ်။ Prominent Economistsအများစုနဲ့ Federal Reserveကိုယ်တိုင်ကတော့ March, Aprilတုန်းက ဖြစ်သွားတဲ့ Japan Quake/Nuclear crisisနဲ့ Middle-east crisisကြောင့် ဆောင့်တက်သွားတဲ့ Oil pricesတွေကြောင့် Global Economyဟာ Soft Patch (Temporary slowdown)ကာလထဲ ရောက်နေတယ်ဆိုပါတယ်။ 2011 second-halfမှာ ပြန်ပြီးAccelerationပြန်ရလာမယ်လို့ တွက်ထားကြပါတယ်။
Uncertainty No. 2
USမှာ Federal Reserveရဲ့ 600billion Treasury buying scheme (well known as QEII)ဟာလည်း ဒီလကုန်ရင် ပြီးတော့မှာမို့လို့ ဘာဆက်ဖြစ်မလည်း သို့လောသို့လောဖြစ်နေကြတာလည်း ပါပါတယ်။ တကယ်တော့ QEIIဟာ ဒီလကုန်ရင် Bond Buying Processပြီးသွားတာပဲရှိတာပါ။ Fedဟာ အဲဒီ့ပိုက်ဆံတွေကို Withdrawလုပ်ဖို့ ၂၀၁၁မပြောနဲ့ ၂၀၁၂တောင် မသေချာပါဘူး။ ဆိုလိုတာက Fedရဲ့ Balance sheetဟာ ဒီလကုန်ရင် ပြန်Deflateမဖြစ်သွားပါဘူး။ 600billion dollarဟာ Bankတွေကနေ သာမန်လူတန်းစားတွေ လက်ထဲအထိရောက်ဖို့ အချိန်ယူရပါတယ်။ အနည်းဆုံး နောက်ထပ် သုံးလေးငါးလလောက်ကြာမှ QEIIရဲ့ Effectကို သိရမှာပါ။ ဒါပေမယ့် QEIIပြီးတော့မယ်ဆိုပြီး မိုးပြိုမှာကြောက်တဲ့သူတွေကတော့ အခုတလော Marketထဲမှာ အများသား။
Uncertainty No. 3
US အစိုးရမှာ အခုမြွေကိုက်နေတဲ့ကိစ္စကတော့ Obamaအစိုးရရဲ့ Borrowable Debt limitတိုးရေး မတိုးရေးပါပဲ။ Democratတွေက August dealineမတိုင်ခင်တိုးချင်ပေမယ့် Republicanတွေက တိုးမယ့်Amountအတိုင်း လာမယ့် Budgetမှာ spending cutsတွေ ပြန်ပြီး compensateလုပ်ပေးရမယ်ဆိုပြီး တောင်းဆိုနေပါတယ်။ နောက်နှစ်မှာ Electionရှိတော့ Republicanတွေကလည်း နည်းနည်းတော့ ဒီနှစ်ပိုညစ်တယ်။ Political Chicken Gameကို နှစ်ဘက်လုံးဆော့နေကြတာ ဘယ်သူအရင် မျက်တောင်စခတ်မလည်းပေါ့။ ဒီအပတ်ထဲမှာတော့ နှစ်ပါတီ ဆက်ဆွေးနွေးကြမယ်(ဆက်သတ်ကြဦးမယ်) ပြောတာပဲ။ Dealတစ်ခု စောစောထွက်လာလေ၊ Marketအတွက် Uncertaintyတစ်ခုလျော့သွားလေပါပဲ။ US Governmentဟာ ထုတ်ရောင်းထားတဲ့ Bondတွေရဲ့ Coupon/Interestမပေးနိုင်ခဲ့ရင် Technical Defaultဖြစ်စေနိုင်တာကြောင့် ဒီကိစ္စဟာ တော်တော်အရေးကြီးပါတယ်။ Biggest Foreign Owner of Treasury Bondဖြစ်တဲ့ တရုတ်အစိုးရကလည်း မင်းတို့လုပ်နေကြတာ Playing with Fireလို့တောင် ထုတ်ပြောပါတယ်။
Uncertainty No. 4
Chinese အစိုးရရဲ့ Monetary Tighteningဟာလည်း Soft landingမဖြစ်ဘဲ လက်လွန်ပြီး Hard landingဖြစ်မလားဆိုပြီး Marketဟာ Evaluateလုပ်နေတုန်းပါပဲ။ Chinese dataတွေထွက်လာရင် Balanceမှန်ဖို့ အရမ်းအရေးကြီးပါတယ်။ ကောင်းလွန်းရင် အစိုးရတော့ Tightening (interest rate hike)ထပ်လုပ်တော့မယ်ဆိုပြီး ကြောက်ကြသလို မှန်းတာထက် နည်းလွန်းရင်လည်း အစိုးရScrewလုပ်တာများလို့ Slowdownဖြစ်သင့်တာထက် ပိုဖြစ်နေပြီဆိုပြီး selloff ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ Shanghai Composite Indexဟာ Aprilလလယ်ကတည်းက ကျလာတာ အခုဆိုရင် 12%နှုန်းလောက် Correctionဖြစ်ပြီးပါပြီ။ Januaryတုန်းက Support Line 2700ဟာ Holdလုပ်ထားနိုင်ပါသေးတယ်။ ဒါဟာကောင်းတဲ့Signပါ။ ဒါပေမယ့် ဒီအပတ် June 14မှာ CPI dataထွက်လာပါမယ်။ CPIဟာ ပြီးခဲ့တဲ့လက 5.3%ထက်များမယ်ဆိုရင် 2700ဟာ Brokenဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
Uncertainty No. 5
သူမပါလို့ ဘယ်ပြီးမလည်း - Greeceလေ။ နှစ်ပတ်လည်အထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့ Marketကို Screw upလုပ်နေသလား အောက်မေ့ရတယ်။ Tax revenueတွေ မှန်းထားသလောက် Collectမလုပ်နိုင်၊ Deficit cutting planတွေကို ကောင်းကောင်းမလုပ်နိုင်နဲ့ အခုပိုက်ဆံထပ်လိုပြန်ပြီ။ Eurozone Leader Germanyက ဒီတခေါက်တော့ Private Greece Bond Holderတွေပါ ပါသင့်တယ်ဆိုပါတယ်။ Germanတွေဖြစ်ချင်တာက Greece Bond Holderတွေဟာ နောက်နှစ်မှာ Matureဖြစ်မယ့် Bondတွေကို နောက်ထပ် (၇)နှစ်လောက် Rolloverလုပ်စေချင်တာပါပဲ။ သူတို့ရဲ့ Reasonကတော့ Greeceဟာ နာလန်ထူဖို့ အချိန်ယူရမယ် ဘာညာပေါ့။ ဒါပေမယ့် ပြဿနာက Major Bond Holderဖြစ်တဲ့ European Central Bank leader Jean-Claude Trichetက ဒါဟာ Defaultတစ်မျိုးပဲဆိုပြီး လက်မခံနိုင်ပါဘူး။ ဒီတော့ နောက်အပတ် Eurozone Finance Minister meeting (June 20)မှာ Finaliseလုပ်ရမယ့် Greece Aid packageဟာ ECB-Germany standoffကြောင့် တကယ်ဖြစ်မလာရင် Julyမှာ Greeceဟာ Defaultဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ Uncertaintyဟာလည်း Marketကို Spookedဖြစ်စေပါတယ်။
Uncertainty No. 6
No. 1မှာပြောခဲ့သလို Economistတွေရဲ့ Global Slowdown Villainကတော့ High Oil Priceတွေပါပဲ။ ပြီးခဲ့တဲ့ အပတ်က OPEC meeting အပြီးမှာ Marketထဲမှာ Supplyလုံလောက်တာမို့ Production Quota ထပ်တိုးဖို့ မလိုဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။ More Supplyဟာ Priceကို ကျစေနိုင်တာမို့ ရေရှည်ကြည့်မယ်ဆိုရင် Global Growthနဲ့ Inflation controlအတွက် ကောင်းပါတယ်။ OPECရဲ့ အကြီးဆုံး Memberဖြစ်တဲ့ Saudi Arabiaကတော့ သူ့ဘာသာ ငါတကောကောပြီး Julyမှာ Productionကို 1million barrels per day ပိုထုတ်ပေးမယ်ဆိုပါတယ်။ ဒီသတင်းထွက်လာတာနဲ့ သောကြာနေ့က Oilဈေးကျတာပါပဲ။ ဒါပေမယ့် Saudiထွက်တဲ့ Crudeဟာ Sour Crude (lower quality than Libya's sweet crude)ဖြစ်တာကြောင့် Sweet crudeအသုံးများတဲ့ Europeနဲ့ Asiaအတွက်တော့ အရမ်းထူးတဲ့ သတင်းကောင်းတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ Libya စစ်ပွဲပြီးမှသာ Stableဖြစ်သွားမယ့်ပုံ ပိုရှိပါတယ်။
တိုမလားလို့ စရေးလိုက်ပါတယ်၊ တော်တော်တောင် များသွားပြီ။ အပေါ်မှာပြောခဲ့တဲ့ Uncertaintiesတွေကြောင့် Marketဟာ Selloffဖြစ်နေတာ မဆန်းပါဘူး။ ဒီလကုန် July လဆန်းပိုင်းရောက်ရင်တော့ ပိုပြီး Certaintyရှိလာမှာမို့ Julyလကုန်ပိုင်းလောက်ကို Market bottomဖြစ်နိုင်တယ်လို့ Conservativelyမှန်းလို့ရပါတယ်။ But we never know. Political Decisions can happen suddenly and Market can roar back anytime soon. However, some certainties must come first.
PS : I'll write Technicals about current Markets soon.
Posted by Aung Myo Htet at 6/12/2011 06:22:00 PM
Labels: correction, uncertainty